IPad-ka cusub wuxuu la yimid muuqaalo "Pro" kala duwan oo run ah | Wararka IPhone
Apple waxay sii waday bandhigyadeedii qalabka ee guga galabnimadii, sidii aan fileynayna, waxaan ku helnay war IPad-ka halka, hadda, ay ku nooshahay magaceeda "Pro" oo leh astaamo kala duwan. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid iibsiga qalabkan, hubaal dhammaan wararkaasi waxay kaa caawinayaan inaad go'aansato (iyo sida ugu wanaagsan). Joog in aan wax walba kuu sheegayno.
IPad-ka cusub wuxuu noqonayaa kan ugu awooda badan uguna soo jiidashada badan, waana ku mahadsan tahay xaqiiqda taas Apple waxay ku dartay processor-ka M1 kaas oo horeyba u labisnaa baaxadda MacBook iyo iMac sidoo kale Sidan oo kale, awoodda iyo fursadaha iPad Pro waa la dhuftay, oo waliba lagu daraa a 8-Core CPU 50% wuu ka dheereeyaa qaabkii hore ee Pro sidoo kale wuxuu hagaajinayaa awooda garaafkeeda 40% oo leh 8-Core GPU. Sida aad filan karto, M1 sidoo kale waxay hagaajineysaa waxtarka qalabka, kaas oo ilaalin doona ismaamul maalin dhan dhib la’aan.
1 Kaydinta cusub iyo isku xirnaanta
2 Kaamiro cusub, shaashad cusub
Kaydinta cusub iyo isku xirnaanta
Dhinaca kale, kuwa inaga mid ah ee haysta kayd yar oo maxalli ah xitaa isticmaalka iCloud, Apple waxay soo bandhigtay nooc cusub oo leh keyd ilaa 2TB ah leh 2x xawaaraha kaydinta. Shaki la'aan go'aan ayaa si aad ah u bogaadiyey dhammaan adeegsadayaasha haysta iPad Pro oo ah aaladda fiidiyowga fiidiyooga ah oo ay ku kaydiso faylal badan oo maxalli ah si loogu shaqeeyo
Laakiin warka hadda uun buu bilaabmay, taasina waa inaan sidoo kale deked cusub ku leenahay iPad Pro si aan ugu xirno agabkeena. Apple hadda waxay ku darsatay dekedda ThunderBolt oo leh illaa 4x bandwidth ka badan. Tani waxay u oggolaan doontaa kaydinta ugu dhakhsaha badan saxannada dibedda ah iyo iswaafajinta isku xirnaanta qalabka dibadda ee xalka 6K. Waxaa naga maqnaa faallooyin ka yimid Apple oo ku saabsan suurtagalnimada in shaashadda lagu ballaariyo kormeerayaasha dibadda, laakiin waxaan weli ku rajo weynahay in tan ay awood u siin doonto cusbooneysiinta iPad OS-ka ee lagu sheegay inuu yahay gaariga koritaanka waxqabadka iPad-ka Goor dhow ayaan ogaan doonnaa.
Ku sii wad wararka iyo ka hadalka xawaaraha, Apple wuxuu ku daray 5G isku xirnaanta iPad-ka, oo awood u siineysa inay tahay qalab aad u fara badan oo aad u fara badan oo awood u leh inay si dhakhso leh uga gudbiso dhammaan noocyada macluumaadka meel kasta. Waxay u muuqataa in Apple ay ku sharadayso mustaqbal "dhaqdhaqaaq" qalabkeeda iyada oo ay ku qalabeynayso tikniyoolajiyaddan.
Kaamiro cusub, shaashad cusub
Dhinaca kale, xaaladda aafada ayaa sidoo kale u muuqata inay saameyn ku yeelatay Apple iyo horumarkiisa taasina waxay ka dhigtay inay kor u qaadaan kamaradda hore ee iPad-ka. Ku qalabaysan kamarad cusub oo 12MP ah oo aad u ballaadhan, waxay isku daraysaa tiknoolajiyad cusub oo ay ugu magac dareen Central Stage. Iyada oo loo marayo tikniyoolajiyaddan, sameynta wicitaan fiidiyow ah (oo markaa la xiriirta xaaladda aan ku nool nahay iyo sida ay u badisay wicitaannada fiidiyowga), kaamirada ayaa kuheli doonta oo isku dayi doonta inaad diirada saarto shaashadda inkasta oo aaladda aysan soconayn. Tan waxaa lagu sameeyay mahadsanidiisa xagasha ballaadhan waxaadna awoodi doontaa inaad ogaato dhowr qof si aad uhesho tallaalka ugu fiican ee suurtogalka ah.
Ugu dambeyntii iyo ugu yaraan, IPad Pro wuxuu yeelan doonaa shaashad yar oo yar-yar oo LED ah oo Apple ay ugu magac dartay Liquid Retina XDR ilaa 1000 nits oo awood ah iyo 1600 oo nits ugu sarreysa oo leh 1.000.000: 1 isbarbardhig ah. Waxaan horeyba u fileynay tikniyoolajiyaddan in laga hirgaliyo iPad-ka, lagana bilaabo, waxaan awoodi doonaa inaan yeelano madow madow iyo waxtarka weyn sidoo kale isticmaalka aaladda.
Waxaan lahaan doonnaa labada nooc ee iPad Pro laga bilaabo Abriil 30, markaan kaydsan karno. Waxay yeelan doonaan a Laga bilaabo qiimaha loogu talagalay moodooyinka 128GB ee € 879 ee qaabka 11-inji ah iyo 1.119 12,9 ee qaabka 170 oo leh koror of 5 oo ah noocyada XNUMXG Sidan oo kale, moodooyinka 2TB waxay gaari doonaan qiimaha € 2.089 ee 11 inji iyo 2.409 12.9 ee XNUMX. Taariikhaha taariikheynta ugu horeysa ee la bilaabi doono in la helo oscillate ee qeybtii labaad ee Maajo.
Xaqiiqdii qaar badan, ka dib markay arkeen boodboodka weyn ee ay ku qaadatay ixtiraamkii hore ee Pro, waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad iibsato. Ilaa iyo inta qalabka sida Magic KeyBoard iyo Apple Pencil lama cusboonaysiin oo wali la jaan qaadaya, waxay ka dhigayaan iPad Pro kan ikhtiyaar iibsasho weyn Adigana? Miyaad iibsan doontaa iPad Pro cusub? noo sheeg faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » iPad Pro » IPad-ka cusub wuxuu la yimid muuqaalo "Pro" kala duwan oo run ah